Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Doaa Farid Farah AbdelSayed, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang tamin’ny 5-11 Jona · Global Voices teny Malagasy » Print
Fantaro i Doaa Farid Farah AbdelSayed, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang tamin'ny 5-11 Jona
Voadika ny 14 Jona 2019 4:46 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sary natolotr'i Doaa Farid Farah AbdelSayed
Amin'izao taona 2019 izao izay ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam- piteny an-tserasera , dia hifandimby ireo mpikatroka mpanandra-teny Afrikana sy mpisolovava hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang,  hizara ny zava-niainan-dry zareo amin'ny fanomezana aina indray sy fampiroboroboana ny fiteny Afrikana. Ity lahatsoratra fampahafantarana ity izao hiresaka momba an'i Doaa Farid Farah AbdelSayed ao amin'ny tetikasa Nubian Voices (@TheNubianVoices ) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Mpanao gazety Egyptiana Nobiana monina any Kairo aho. Nanomboka ny hetsika antsoina hoe “Ny Feo Nobiana” aho tamin'ny volana Jolay 2018. Mikendry ny hanomezana varavarana midanadana ho an'ireo Nubian hiteny mafy, satria tsy mba voatatitra amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ireo Nobiana. Mifantoka amin'ny fiteny Nobiana sy ny ezaka hitazonana izany izahay. Manasongadina ny tetikasa Nobiana rehetra, ny fanombohana ary ny fikambanana izay mitazona ny resaka momba an'i Nubia izahay.
Efa ela no hadinodino ny fiteny Nubian tao Egypta. Tsy misy ezaka ofisialy handraketana ilay fiteny sy ny haisorany ka mety hanjavona izany. Am-bava amin'ny alàlan'ny taranaka zokiolona no hany fomba ho an'ireo tanora Nubiana hianarana ny fiteny Nubian satria tsy hahita boky izy ireo hiverenana hijerena izany. Na izany aza, efa nisy ny ezaka miabo momba izany vao haingana tao amin'ireo bilaogy sy ny fampiharana amin'ny finday mba handraketana sy hanavotana ilay fiteny.
Mikasa ny hifantoka amin'ny ezaka hitehirizana ny Fiteny Nubian aho ary hiaro azy tsy ho very. Nampiasaina hanoratana sy hamakiana ilay fiteny teo aloha, saingy tsy mahafantatra ny fomba hanaovana izany ny ankamaroan'ny Nubians satria tsy misy ny fampiharana. Tsy tianay hitranga amin'ny fiteny fampiasa izany.
Ny hamorona ny sehatra an-tserasera izay hanangonana ny tetikasa Nubian sy ny hetsika rehetra amin'ny toerana iray no tena antony nanosika ahy. Ahitana fizarana fifanakalozan-kevitra samihafa amin'ny Fiteny Nubian ny sehatra. Mety hiatomboka amin'ny fisian'ny boky hampianarana ny fiteny Nubian ity fizarana ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/14/139647/
 fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/03/18/celebrating-african-linguistic-diversity-online-through-a-rotating-twitter-account/